Best NEM mgbanwe
Best NEM ọnụego mgbanwe ọnụego taa site na netwọk ego ego. Ebe kachasị mma ịzụta ma ọ bụ ire NEM taa.
Best Buy price NEM $ 0.037710 XEM/BTC BTC-Alpha
Ahịa ahia kacha mma NEM $ 0.045364 XEM/BTC Global Blockchain Exchange
A na-ahụrịrị ọkwa kacha mma NEM na usoro ego ego abụọ na-agbanwerịta mgbanwe. NEM egobere ego ego maka ahia azụmaahịa ọ bụla ma dabere na nguzosi ike nke ọkọnọ na ịrịọ. Ego nke inye na choro NEM na mgbanwe obula di iche na oge ndi ozo. Ọ dị mfe ịghọta na NEM ọnụego mgbanwe ego ego n'otu n'otu na-ahaziri ọnye mgbanwe crypto ọ bụla.
Best NEM obere akpa
Ka 28, 2020 Kachasị mma ịzụta NEM na Ka 28, 2020 Ọnụ ahịa kacha mma NEM na $ sell_pair ụzọ azụmaahịa na $ sell_market ahịa.
Elekere NEM obere akpa bụ nyocha nke ndị nwe ego ego. Mpempe akwụkwọ Crypto bụ koodu mmemme ezubere maka nchekwa, ndozi, ịkwụ ụgwọ ego crypto. Mpempe akwụkwọ ego crypto nwere oke nke: ntụkwasị obi, ịdị mfe, nchekwa. Mpempe akwụkwọ kachasị mma NEM nwere ntụkwasị obi kacha mma yana nchekwa kacha mma.
Ụlọ ahịa NEM kacha mma
Oke ego NEM ọnụego mgbanwe maka taa bụ 28/05/2020 - egosiri na tebụl azụmahịa niile maka taa. Ọnụ ego kachasị mma maka ịzụrụ, ire ego ego NEM na 28/05/2020 taa anyị gosipụtara tebụl ndị dị n'elu maka ịdị mfe nghọta. Ihe ndekọ ntanetị "Kasị mma NEM maka taa 28/05/2020" na-enyocha ọnụego ego ego kachasị mma na ntanetị. Kachasị mma NEM ọnụego azụtara egosiri - egosiri na elu peeji ahụ site na uru a na-akpọghachi. NEM na dollar.
BTC USDT ETH KRW TRY XRP BITCNY USD EUR BCH QC IDR GBP JPY INR UAH Ọzọ ...
Tebụl na-egosi taa ọnụahịa NEM nke ọ bụla site na netwọk ego ego. A gbanwere ọnụego mgbanwe maka ọnụọgụ abụọ abụọ na dollar US.
HitBTC XEM/USDT $ 0.040391 $ 511 261 -
HitBTC XEM/BTC $ 0.040272 $ 187 874 -
HitBTC XEM/ETH $ 0.040321 $ 69 642 -
Dex-Trade XEM/USDT $ 0.040634 $ 174 -
Dex-Trade XEM/ETH $ 0.041471 - -
Dex-Trade XEM/BTC $ 0.037838 - -
CoinEx XEM/USDT $ 0.040866 $ 188 048 -
CoinEx XEM/BTC $ 0.040468 $ 123 100 -
CoinEx XEM/BCH $ 0.040426 $ 25 790 -
OKEx Korea XEM/ETH $ 0.040926 - -
OKEx Korea XEM/BTC $ 0.040583 - -
OKEx Korea XEM/USDT $ 0.040824 - -
OKEx XEM/USDT $ 0.040643 $ 1 971 339 -
OKEx XEM/BTC $ 0.040651 $ 446 356 -
OKEx XEM/ETH $ 0.040862 $ 65 989 -
Hotbit XEM/BTC $ 0.040946 $ 48 803 -
Hotbit XEM/ETH $ 0.04031 $ 47 690 -
Hotbit XEM/USDT $ 0.040732 $ 47 616 -
Gate.io XEM/USDT $ 0.040351 $ 1 291 -
Gate.io XEM/BTC $ 0.040576 $ 200 -
Gate.io XEM/ETH $ 0.040561 $ 35 -
P2PB2B XEM/BTC $ 0.040251 $ 147 536 -
P2PB2B XEM/ETH $ 0.04035 $ 2 328 -
DigiFinex XEM/BTC $ 0.040445 $ 581 645 -
DigiFinex XEM/ETH $ 0.04083 $ 49 010 -
Livecoin XEM/USD $ 0.04024 $ 21 600 -
Livecoin XEM/BTC $ 0.040625 $ 5 145 -
Bittrex XEM/BTC $ 0.040536 $ 31 812 -
Bittrex XEM/ETH $ 0.040397 $ 923 -
BW.com XEM/USDT $ 0.040781 $ 49 232 -
BW.com XEM/ETH $ 0.04083 $ 11 -
ProBit Exchange XEM/KRW $ 0.040024 $ 18 071 -
ProBit Exchange XEM/USDT $ 0.040816 $ 16 840 -
Bitrue XEM/XRP $ 0.04041 $ 12 687 -
Bitrue XEM/ETH $ 0.040656 $ 7 269 -
BitMax XEM/USDT $ 0.04014 $ 728 -
BitMax XEM/BTC $ 0.040896 $ 82 -
Zaif XEM/JPY $ 0.040544 $ 299 487 -
Zaif XEM/BTC $ 0.040551 $ 5 500 -
KuCoin XEM/BTC $ 0.040465 $ 1 946 -
KuCoin XEM/USDT $ 0.040678 $ 1 510 -
Global Blockchain Exchange XEM/ETH $ 0.045048 - -
Global Blockchain Exchange XEM/BTC $ 0.045364 - -
Indodax NEM/IDR $ 0.040934 $ 738 -
Indodax NEM/BTC $ 0.039475 $ 259 -
BTC-Alpha XEM/BTC $ 0.03771 - -
CoinTiger XEM/BITCNY $ 0.040299 $ 9 835 -
Bitvavo XEM/EUR $ 0.040628 $ 3 899 -
Thodex XEM/TRY $ 0.040721 $ 8 170 -
CoinDCX XEM/BTC $ 0.040886 $ 445 -
Huobi Russia XEM/USDT $ 0.040502 - -
VCC Exchange XEM/BTC $ 0.04121 $ 100 856 -
Huobi Korea XEM/BTC $ 0.040372 $ 440 -
Liquid XEM/BTC $ 0.037807 - -
ZBG XEM/USDT $ 0.040735 $ 3 082 106 -
Crex24 XEM/BTC $ 0.040953 $ 34 -
Exrates XEM/BTC $ 0.040599 $ 546 492 -
COSS XEM/BTC $ 0.040552 - -
Bitbns XEM/INR $ 0.04106 $ 17 -
Upbit XEM/KRW $ 0.039466 $ 439 866 -
Bithumb XEM/KRW $ 0.039872 $ 182 271 -
DragonEX XEM/BTC $ 0.040418 $ 126 562 -
Cryptomate XEM/GBP $ 0.043879 - -
Huobi Global XEM/USDT $ 0.040644 $ 146 616 -
Koineks XEM/TRY $ 0.043056 $ 5 972 -
Binance XEM/BTC $ 0.04023 $ 541 895 -
Poloniex XEM/BTC $ 0.040446 $ 14 451 -
ZB.COM XEM/QC $ 0.0401 $ 6 541 -
WazirX XEM/USDT $ 0.040601 $ 2 693 -
Kuna XEM/UAH $ 0.039332 $ 36 -
Anyị na-egosikwa ụdị ego a ga-eji zụta NEM. Ọnụahịa kachasị mma nke NEM egosiputara n'isi elu nke akwụkwọ ahụ na-akwụghachi ụgwọ nke NEM na dollar. N’akụkụ ọnụ ahịa ire ahịa nke ego ego ị ga - ahụ ụzọ njikọ n’ahịa mgbanwe nke NEM na - ere kacha mma. Ọnụahịa kacha mma maka NEM nwere ike ịbụ mgbe ana-ere maka ego na-adịchaghị mma ma ọ bụ ego ego ndị ọzọ.
Ọzọkwa, ibe anyị na-enye ozi gbasara ego a ga-ere NEM. Nmegharị kacha mma maka ịzụ ma ọ bụ ire NEM dị na tebụl ọrụ anyị. Edebere mgbanwe ndị a na ọnụego kacha mma a gbanwere na dollar mgbe ị na-azụ ma na-ere NEM gaa ego ndị ọzọ na cryptocurrenrency. Can nwere ike ihu NEM azụmahịa azụmahịa na ego ọzọ ma ọ bụ ego ego ma ọ bụrụ na i jiri nzacha nke ego ndị ọzọ dị n'elu tebụl nke mgbanwe ego ego kachasị mma.